ACDSee Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (6,99 euro) | Vaovao IPhone
ACDSee Pro dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra azontsika jerena ao amin'ny App Store sady maka sary no manitsy azy ireo avy eo. Ary tsy milaza izany aho, fa mila jerentsika fotsiny hoe ahoana ny ACDSee Pro manana naoty 4,5 kintana amin'ny 5 azo atao. Misaotra an'ity rindranasa ity, izay misy vidiny mahazatra 6,99 euro ao amin'ny App Store sy izany mandritra ny fotoana voafetra dia azo alaina maimaim-poana izany, azontsika atao ny maka sy manitsy ny sarintsika ary koa manao collage mahafinaritra hahafinaritra mankafy fiainana an-tsary mahafinaritra amin'ny iPhone.
Raha miresaka momba ny fizarana fakan-tsary isika dia manana fomba fitifirana maro arakaraka ny toe-javatra ahitantsika ny tenantsika, ao anatin'izany ny fifehezana ny tanana mba hanitsiana ny fifantohana, ny fipoahana, ny fifandanjana fotsy, ny hafainganan'ny shutter ... ao anatin'izany ny maodely tselatra samihafa, ao anatin'izany ny mpameno. Ity rindranasa ity dia manolotra ambaratonga iray ihany koa mba hivoahan'ny sary rehetra mahitsy. Tsy nety ho tsy hita koa ireo sivana tamin'ity mpamoaka sary ity, sivana mamela antsika hametraka hoe iza no zava-dehibe indrindra amin'ny fakana sary, ny fiasan'ny sivana, na dia efa elaela aza dia ampahany no nanodikodina azy tamin'ny alàlan'ny fampiharana an'io karazana io.
ACDSee Pro dia a mpamoaka sary mahery izay ahafahantsika manitsy ny haavon'ny hazavana, ny aloka, ny mifanohitra amin'izany, ny mizana, ny mizana fotsy, ny mahasosotra, ny maranitra ... Saingy afaka mampiditra effets hafa ihany koa isika amin'ny fanaovana ho azy manokana ny sarintsika, mamboly azy ireo, manitsy azy ... izany rehetra izany miaraka amin'ny fifehezana tena tsotra.
Ho an'ireo tia ny collages, ACDSee Pro dia manolotra amboaram-peo maro azo atao mba hizara ny fitadidiantsika amin'ny sary tokana. Azontsika atao ny mifidy haingana ireo sary izay tiana atambatra ho lasa sary tokana ka ilay fampiharana manolora endrika 100 ho anay, zaraina amin'ny tsipika mitsangana na mitsivalana.
ACDSee Pro dia mitaky farafahakeliny 9.3, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io.
ACDSee Pro€ 7,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » ACDSee Pro, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (6,99 euro)
Tena fampiharana tena tsara!
Misaotra tamin'ny fampitandremana !!!
Mikelo dia hoy izy:
Maimaimpoana, tsy misy.
Niampanga ahy 1,98 € izy ireo.
Valiny tamin'i Mikelo
Hatsarao ny fifandraisana amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny iPhone anao noho ny WiFi